Rohingya Students Forum: September 2018
ရှိလား၊ မရှိဘူးလား_ ရိုဟင်ဂျာ
ဒီစာတမ်းကို တင်ပြထားသူရဲ့ အောက်ဆုံးက မှတ်ချက်ကိုဖတ်ကြည့်ဗျာ။
((မှတ်ချက်။ ။Facebook တွင်မျှဝေခြင်း ခွင့်မပြု။)) တဲ့။ ဒါပေမဲ့ကောင်းလွန်းလို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ခိုးကူးပြီးတင်လိုက်တယ်။ နောက်မှ တောင်းပန်လိုက်တော့မယ်ဗျာ။
(တဖက်က ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်အခါကမျှ မရှိကြောင်း၊ တဘက်မှ ခိုးဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ မောင်းထုတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တဘက်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီများ မဟုတ်ကြောင်း နှင့် ၂ဘက်မကြေလည်မှုမှအစ တဖက်နှင့်တဖက် အခင်းဖြစ်ပွားကာ လူမှုပြသနာများနေ့စဉ်နှင့်အမျှ နားမဆန့်အောင် ကြားနေရပါသည်။ သို့သော်လည်း မကြားချင် မြင်လျှက်သားဆိုသလို မိုးလင်းရ်ျ သတင်းဖတ်လိုက်သည် နှင့်တပြိုင်နက် မြင်တွေ့နေရပါသည်။ အပေါင်းအသင်းများနှင့် စကားပြောမိလျှင်လည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားမှ ခိုးဝင်လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပြန်၍ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို အမှန်တကယ် သိချင်မိခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ့်အရေးနှင့်ကိုယ်မို့ ထိုကိစ္စ မလေ့လာနိင်ခဲ့ပါ။
မနေ့တနေ့က မိမိပြုစုနေသော စာတမ်းအတွက် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်များသို့ ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုရာမှ “Dr. Francis Buchnan, M.D” ရေးသားသော “မြန်မာအင်ပါယာအတွင်း ပြောဆိုသုံးနှုန်းသောဘာသာစကားအချို့၏ ဝေါဟာရကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း (A Comperative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire)”ဆိုသည့် စာတမ်းပါ ၁၇၉၉ ခုနှစ်က ပုံနှိပ်ထုပ်ဝေခဲ့သော သုတေသနစာအုပ်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံဟားဗတ် ကောလိပ် စာကြည့်တိုက်တွင် အမှတ်မထင် တွေ့ခဲ့ပါသည်။ စာပေကိုစိတ်ဝင်စားသူပီပီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားများ မည်သို့ရှိသည်ကို သိလိုစိတ်ဖြင့် ဖတ်ရှုမိရာမှ ရိုဟင်ဂျာနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်အချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုစာအုပ်တွင်စာရေးဆရာမှ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမျိုးစုများစွာ မှီတင်းနေထိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အမူအယာ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်များကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်လာစေရန် သရုပ်ဖေါ်ရေးသားထားပါသည်။ ထို့နောက် အနောက်တိုင်းသားများက ဘားမား၊ ဘားမန်း စသဖြင့်ခေါ်သော သူများက သူတို့ကိုသူတို့ (Myanmaw) မြန်မော ဟုခေါ်ကြောင်း၊ ပဲခူးသားတို့က မြန်မာကို ပုမ္မေ(Pummay) ဟု ၄င်း၊ ကရယား(Karaya) (ကယားဟုထင်ပါသည်) တို့က မြန်မာတို့အား ယိုး(ယော) (Yoo) ဟု၎င်း၊ ကူစေး(Cussay) (ကသဲဟုထင်ပါသည်) တို့က မြန်မာတို့အား အဝေါ(Awaw)၊စော( Shau)၊ ကမော (Kammau) (ကမန်ဟုထင်ပါသည်) ဟု၎င်း၊ ယူနန်တရုတ်တို့က မြန်မာတို့အား လောင်မီးန် (Laumeen)ဟု၎င်း၊ အိုင်ကိုဘတ် (Aykobat) တို့က အန်းဝ(Anwa) ဟု၎င်း ခေါ်ဆိုကြကြောင်း၊ အာရကန် များကို မြန်မောကြီး (Myammaw gyee) ဟု၎င်း၊ တနင်္သာရီသားတို့ကို မူ မြန်မာတို့က ထားဝယ်သား (Dawayza) နှင့် ဘိတ်သား(Byeitza) ဟု၎င်း ခေါ်ဆိုကြကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။
တဖန် မြန်မာအင်ပါယာကြီး၏ ဝေါဟာရတွေလေ့လာရသည်မှာ သူ့အတွက်မလွယ်ကူလှကြောင်း၊ လူမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုး ဝေါဟာရ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု နားလည်ရန် မလွယ်ကူကြောင်း၊ ဘာသာစကားများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူကွဲပြားပုံကို သေချာစွာ သုတေသနလုပ် ပြုစုထားခဲ့ပါသည်။ ဘာသာစကားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အဓိက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသော ဒေသသုံးစကား ၄ခုရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့မှာ မြန်မာ၊ အာရကန်၊ ယိုး နှင့် တနင်္သာရီ တို့ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြပြီး ထို မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ တနင်္သာရီ နဲ့ယော စကားအသုံးအနှုန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ထိုအထဲမှ အချို့မှာ
English Myanmaw Yakain Tanayntharee Yo
Star Kyee Kyay Kay
Water Yae Ree Rae
Child Loogalay Looshee
Stand Ta Mateinay Mateenahay
Kill That Sot Asatu တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်တွင် (အောက်ပါတို့မှာ စာရေးဆရာ၏ မူလစာသားများအား မိမိအနေဖြင့် တတ်စွမ်းသမျှ ဘာသာပြန် တင်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
“The proper natives of Arakan, call themselves Yakain which name is also commonly given to them by the Burmas. By the people of Pegu they are named Takain. By the Bangal Hindus, at least by such of them have been settled in Arakan, the country is called Rossawn. The Mohammedans settled at Arakan call the country Rovingaw, the Persians call it Rekan.”
အာရကန်ဒေသမှ အတည်တကျနေထိုင်သူများသည် မြန်မာများက ခြုံငုံ ခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ပင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုသူများ ကိုပဲခူးသားများက တခိုင်ဟု၎င်း၊ အာရကန်ဒေသတွင်း အခြေတကျနေထိုင်လျှက်ရှိသော ဘန်ဂေါလ် ဟိန္ဒူတို့က ရိုစောင် နိုင်ငံဟု၎င်း၊ အာရကန်ဒေသတွင်း အခြေတကျနေထိုင်ကြသော မွတ်စလင်တို့က ရိုဝင်ဂေါ နိုင်ငံဟု၎င်း၊ ပါရှန်တို့က ရကန် ဟု၎င်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
“I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation.”
စာရေးသူအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွင်းသုံးနှုန်းသော ဟိန္ဒူလူမျိုးများမှသက်ဆင်းလာသည်ဟုထင်ရှားမြင်သာသော ဒေသသုံးစကား ၃မျိုး ကိုတင်ပြပါမည်။
“The first is that spoken by the Mohammedans, who have been long settled in Arakan, and who called themselves Rooinga, or natives of Arakan.”
ပထမဆုံး အာရကန်ဒေသတွင် ကြာမြင့်စွာအခြေတကျနေထိုင်လျှက်ရှိသော၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုအင်ဂါ (သို့) ဌာနေအာရကန် ဟုခေါ်ဆိုသော မိုဟာမေဒင်များရဲ့ စကားကို တင်ပြပါမည်။
“The second dialect is that spoken by the Hindus of Arakan. They called themselves Rossawn.”
ဒုတိယအနေနဲ့ အာရကန်ဒေသနေ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုစောင်ဟုခေါ်သော ဟိန္ဒူနွယ်ဝင်များရဲ့ စကားကိုတင်ပြပါမည်။
“The last dialect of Hindustanee which I shall mention is that ofapeople called by the Burmas Aykobat, they called themselves Banga, many of whom are slaves at Amarapura. Formerly they had kings of their own, but their kingdom had been overturned by the king of Munnypura. Then was taken last by the Burmas and were brought to Ava. Banga was seven days journey south west from Munnypura; it must, therefore, be on the frontiers of Bengal, and may, perhaps, be the country called in our maps Cashar.”
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဟိန္ဒူ မှဆင်းသက်လာတဲ့စကားကတော့ မြန်မာများက အေကိုဘတ် ဟုခေါ်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘင်္ဂ ဟုခေါ်သည့် သူတို့၏စကားဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများမှာ တချိန်က ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းနှင့်နေထိုင်ခဲ့ရာမှ ၄င်းတို့ကို မဏိပူရမှ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးထိုမှတဆင့် မြန်မာတို့က သိမ်းပိုက်ကာ အင်းဝထိ ကျွန်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခံလာရသူများဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂဒေသသည် မဏိပူရ၏အနောက်တောင်ဘက် တွင်ရှိပြီး (၇) ရက်ခရီးစာသာရှိသော၊ စာရေးသူ၏မြေပုံအရ ကချာဟုခေါ်သော ဘင်္ဂလားပြည်၏ အရှေ့ဘက်စွန်းဒေသဖြစ်ပါသည်။ ဟုရေးသားထားပါသည်။
ထို့ပြင် ရိုဟင်ဂါ၊ ရိုစောင် နဲ့ ဘင်္ဂ စကားအသုံးအနှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုအထဲမှ အချို့မှာ
English Rooinga Rossawn Banga
Sleep Layrow Needsara Hooleek
Sun Bel Sooja Bayllee
Moon Sawn Sundsa Satkan တို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တခေတ်တခါက ဒေသတွင်း၌ Mighty Empire အဖြစ် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ကျော်ကြားခဲ့သော ကြောင့် အနောက်တိုင်း ပညာရှင်များပင် မြန်မာ့အင်ပါယာအကြောင်း တစေ့တစောင်း လာရောက်လေ့လာ ရေးသားပြုစုထားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါစာတမ်းကို ရေးသားပြုစုခဲ့သူသည်လည်း ထိုခေတ်ထိုအခါက မြန်မာနိုင်ငံသို့ကိုယ်တိုင် လာရောက်လေ့လာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူ၏မှတ်တမ်းကို ၁၇၉၉ တွင်မှ စတင်ရ်ျသုတေသနပြု ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဟားဗတ်ကောလိပ်အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ၏ Library များတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၁၇၉၉ ခုနှစ်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ဖြစ်သော ဘိုးတော်ဘုရား (၁ရ၈၂-၁၈၁၉) မှ အမရပူရ နေပြည်တော်ကို ဗဟိုပြု မင်းလုပ် အုပ်ချုပ်နေသော တတိယမြန်မာအင်ပါယာ အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးဆရာ၏ ရေးသားချက် “the Mohammedans, who have been long settled in Arakan, and who called themselves Rooinga, or natives of Arakan.” အရပင် ရိုဟင်ဂျာသည် ၁ရ၉၉ (စာအုပ်ထုတ်ဝေသည့်နှစ်) မတိုင်မီကပင် အာရကန်ဒေသအတွင်း ကာလကြာမြင့်စွာ အခြေတကျ နေထိုင်လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်စကားပင်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် ထိုစဉ်အခါက မြန်မာအင်ပါယာသို့ လာရောက်ခဲ့ကြပြီး ဒတ်ခ်ျနှင့် ပြင်သစ်တို့ကလည်း ၄င်းတို့ဘာသာစကားဖြင့် ရခိုင်ဒေသတွင်နေထိုင်သူတို့အကြောင်း မှတ်တမ်းများ ပြုစုထားခဲ့သည်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။Facebook တွင်မျှဝေခြင်း ခွင့်မပြု။)))
Posted by Rohang king at 10:02 PM
Labels: ရိုသမိုင်း, genocide docs, History, သုတ
ရှေးမြန်မာ့ အလီပေါင်း နှင့် ယနေ့ရို အလီပေါင်း ရေတွက်ပုံ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားသည် အလွန်ရှေးကျသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ သက္ကတ၊ အာရဗီ အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ် မြန်မာ့ကျောက်စာများ၊ ရှေးခေတ် အာရ်ကာန်ကျောက်စာများတွင် ယနေ့သုံးရိုစကားလုံး အများအပြားတွေ့ရှိရသည်။ ရာဇဝင်ထဲက ပုဏ္ဍားစကား စာအုပ် ရှေးခေတ်ကျောက်စာသုံး စကားလုံးများကို ဖော်ပြရာတွင် စကားလုံးအများစုသည် ယနေ့သုံး ရိုဟင်ဂျာစကားနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ဆင်တူနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အနန္ဒစန္ဒြာကျောက်စာတွင်လည်း အများစုမှာ လေယူလေသိမ်း အနည်းငယ်လွဲသည်မှအပ ယနေ့သုံးရိုဟင်ဂျာစကားနှင့် ဆင်တူနေကြောင်း ဘာသာဗေဒပညာရှင်များ၏-ဖော်ပြချက်အရ တွေ့ရသည်။ ဤစာတမ်းမှာ ဖော်ပြသွားမည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ အလီပေါင်း ရေတွက်ပုံကို ရှေးမြန်မာအလီပေါင်း ရေတွက်ပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ရ လွယ်ကူစေရန်နှင့် ပင်ရင်းအသံကို လွယ်လွယ်လေး သိနိုင်အောင် ရိုဟင်ဂျာစကားကို မြန်မာစာဖြင့် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဆုံးတွင် ရိုဟင်ဂျာလိပ်နှင့်လည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
၉ × ၁- ဂူနေ =၉ ၉ × ၁- လီ = ၉
နော x ဧက = နော
နော x ဒွီး = အဉ်ရာ့ရော့
နော x တိန် = ဟာံတာသှ်ျ
နော x စိုက်ရ် = ဆတ္တိရိသျှ်
နော x ဖာဉ်စ် = ဖာံစ်စာလီသျှ်
နော x ဆော့ = ဖဉ်ဈာသှ်ျစိုက်ရ်
နော x ဟာံတ် = ဟိုက်ထ်တိန်
နော x အဋ္ဌ = ဗာဟတ္တိုရ်
နော x နော = ဧက် အသျှီ
နော × ဧက = နော
နဝ × ဒွေး = အဋ္ဌာရသ
နဝ × တြိန္နာ = သတ္တဗီသ
နဝ × ဇယ = ဆတြိသ
နဝ × ပဉ္စ = ဗျည်းစာလီသ
နဝ × သော = ဇော ပဉ္စဿ
နဝ × သတ္တ = တြိဆ
နဝ × အဋ္ဌ = ဗားသတ်
နဝ × နဝါ = ဧက အဿိ
၈ x ၁ - ဂူနေ = ၈ ၈ x ၁ - လီ = ၈
အာံခ်ျဋ္ဌော x ဧက = အာံခ်ျဋ္ဌော
အာံခ်ျဋ္ဌော x ဒွီး = သျှူဠော
အာံခ်ျဋ္ဌော x တိန် = စိုဗီသျှ်
အာံခ်ျဋ္ဌော x စိုက်ရ် = ဗတ္တိရီိသျှ်
အာံခ်ျဋ္ဌော x ဖာဉ်စ် = စာလ္လီသျှ်
အာံခ်ျဋ္ဌော x ဆော့ = အဋ္ဌစာလ္လီသျှ်
အာံခ်ျဋ္ဌော x ဟာံတ် = ဖဉ်ဈာသှ်ျဆော့
အာံခ်ျဋ္ဌော x အဋ္ဌ = ဟိုက်ဋ္ဌ်စိုက်ရ်
အာံခ်ျဋ္ဌော x နော = ဗဟာတ္တိုရ်
အဋ္ဌ × ဧက = အဋ္ဌ
အဋ္ဌ × ဒွေး = သောဠသ
အဋ္ဌ × တြိန္နာ = ဇောဗီသ
အဋ္ဌ × ဇယ = ဗားတြိသ
အဋ္ဌ × ပဉ္စ = သုဉ္စာလီသ
အဋ္ဌ × သော = အဋ္ဌာ စာလီသ
အဋ္ဌ × သတ္တ = ဆ ပဉ္စဿ
အဋ္ဌ × အဋ္ဌ = စတုဆဋ္ဌိ
အဋ္ဌ × န၀ါ = ဗားသတ်
၇ x ၁ - ဂူနေ = ၇ ၇ x ၁ - လီ = ၇
ဟာံတ် x ဧက = ဟာံတ်
ဟာံတ် x ဒွီး = စိုယ်ဒ္ဓော့
ဟာံတ် x တိန် = ဧက်ကသျှ်
ဟာံတ် x စိုက်ရ် = အဉ်ရာ့သျှ်
ဟာံတ် x ဖာဉ်စ် = ဖာဉ်တြိသျှ်
ဟာံတ် x သော = ဗီအလ္လီသှ်ျ
ဟာံတ် x ဟာံတ် = စာလီသျှ်နော
ဟာံတ် x အဋ္ဌ = ဖဉ်ဈာသှ်ျဆော့
ဟာံတ် x နော = ဟိုက်ဋ္ဌတိန်
သတ် × ဧက = သတ်
သတ္တ × ဒွေး = စတုရာ ဒသ
သတ္တ × တြိန္နာ = ဧကာဗီသ
သတ္တ × ဇယ = အသဋ္ဌာဗီသ
သတ္တ × ပဉ္စ = ပဉ္စာတြိသ
သတ္တ × သော = ဗား စာလီသ
သတ္တ × သတ္တ = န၀ါ စာလီသ
သတ္တ × အဋ္ဌ = ဆ ပဉ္စဿ
သတ္တ × နဝါ = တြိဆ
၆ x ၁ - ဂူနေ = ၆ ၆ x ၁ - လီ = ၆
ဆော့ x ဧက = ဆော့
ဆော့ x ဒွီး = ဗာရော့
ဆော့ x တိန် = အာဉ်ရာ့ရော့
ဆော့ x စိုက်ရ် = စိုဗ္ဗီသျှ်
ဆော့ x ဖာဉ်စ် = တြိသျှ်
ဆော့ x ဆော့ = ဆတြိသျှ်
ဆော့ x ဟာံတ် = ဗီအလ္လီသျှ်
ဆော့ x အဋ္ဌ = အဋ္ဌစာလ္လီသျှ်
ဆော့ x နော = ဖဉ်ဈာသှ်ျစိုက်ရ်
သော × ဧက = သော
သော × ဒွေး = ဒွါဒသ
သော × တြိန္နာ = အဋ္ဌရသ
သော × ဇယ = ဇောဗီသ
သော × ပဉ္စ = သုံ တြိသ
သော × သော = ဆတြိသ
သော × သတ္တ = ဗား စာလီသ
သော × အဋ္ဌ = အဋ္ဌာ စာလီသ
သော × န၀ါ = ဇော ပဉ္စဿ
၅ x ၁ - ဂူနေ = ၅ ၅ x ၁ - လီ = ၅
ဖာဉ်စ် x ဧက = ဖာဉ်စ်
ဖာဉ်စ် x ဒွီး = ဒေါသျှ်
ဖာဉ်စ် x တိန် = ပုဉ်ဒရော့
ဖာဉ်စ် x စိုက်ရ် = ကူရီ
ဖာဉ်စ် x ဖာဉ်စ် = ဖဉ်စသျှ်
ဖာဉ်စ် x ဆော့ = တြီသျှ်
ဖာဉ်စ် x ဟာံတ် = ဖာဉ်စ်တြိသျှ်
ဖာဉ်စ် x အဋ္ဌ = စာလ္လီသျှ်
ဖာဉ်စ် x နော = ဖဉ်စာလ္လီသျှ်
ဗျည်း × ဧက = ဗျည်း
ဗျည်း × ဒွေး = သုံဒသ
ဗျည်း × တြိန္န = ပဉ္စာဒသ
ဗျည်း × ဇယ = သုံဗီသ
ဗျည်း × ပဉ္စ = ပဉ္စာဗီသ
ဗျည်း × သော = သုံ တြီသ
ဗျည်း × သတ္တ = ပဉ္စာ တြိသ
ဗျည်း × အဋ္ဌ = သုံစာလီသ
ဗျည်း × န၀ါ = ဗျည်းစာလီသ
၄ x ၁ - ဂူနေ = ၄ ၄ x ၁ - လီ = ၄
စိုက်ရ် x ဧက = စိုက်ရ်
စိုက်ရ် x ဒွီး = အံခ်ျဋ္ဌော
စိုက်ရ် x တိန် = ဗာရော့
စိုက်ရ် x စိုက်ရ် = သျှူဠ္လော
စိုက်ရ် x ဖာဉ်စ် = ကူရီ
စိုက်ရ် x ဆော့ = စောဗ္ဗီသျှ်
စိုက်ရ် x ဟာံတ် = အဉ်ရာ့သှ်ျ
စိုက်ရ် x အဋ္ဌ = ဗတ္တိရိသျှ်
စိုက်ရ် x နော = ဆတ္တိရိသျှ်
ဇယ × ဧက = ဇယ
ဇယ × ဒွေး = အဋ္ဌ်
ဇယ × တြိက = ဒွါဒသ
ဇယ × စတုက = သောဠသ
ဇယ × ပဉ္စ = သုံ ဗီသ
ဇယ × သော = ဇောဗီသ
ဇယ × သတ္တ = အသဋ္ဌံဗီသ
ဇယ × အဋ္ဌ = ဗား တြိသ
ဇယ × န၀ါ = ဆ တြိသ
၃ x ၁ - ဂူနေ = ၃ ၃ x ၁ - လီ = ၃
တိန် x ဧက = တိန်
တိန် x ဒွီး = ဆော့
တိန် x တိန် = နော
တိန် x စိုက်ရ် = ဗာရော့
တိန် x ဖာဉ်စ် = ပုဉ်ဒရော့
တိန် x ဆော့ = အဉ်ရာ့ရော့
တိန် x ဟာံတ် = ဧက်ကသျှ်
တိန် x အဋ္ဌ = စောဗ္ဗီသျှ်
တိန် x နော = ဟံတ္တာသျှ်
တြိန်း × ဧက = တြိန်း
တြိန်း × ဒွေး = ဆ
တြိန်း × တြ = နော
တြိန်း × ဇယ = ဒွါဒသ
တြိန်း × ပဉ္စ = ပဉ္စာဒသ
တြိန်း × သော = အဋ္ဌာရသ
တြိန်း × သတ္တ = ဧကဗီသ
တြိန်း × အဋ္ဌ = ဇောဗီသ
တြိန်း × န၀ါ = သတ္တာဗီသ
၂ x ၁ - ဂူနေ = ၂ ၂ x ၁ - လီ = ၂
ဒွီး x ဧက = ဒွီး
ဒွီး x ဒွီး = စိုက်ရ်
ဒွီး x တိန် = ဆော့
ဒွီး x စိုက်ရ် = အံခ်ျဋ္ဌော
ဒွီး x ဖာဉ်စ် = ဒေါသျှ်
ဒွီး x ဆော့ = ဗာရော့
ဒွီး x ဟာံတ် = စိုဒ္ဒော့
ဒွီး x အဋ္ဌ = သျှူဠ္လော
ဒွီး x နော = အဉ်ရာ့ရော့
ဒွေး × ဧက = ဒွေး
ဒွေး × ဒွေး = စာယ
ဒွေး × တြိန်း = ဆ
ဒွေး × စာလီ = အဌ်
ဒွေး × ပဉ္စ = သုံဒသ
ဒွေး × သော = ဒွါဒသ
ဒွေး × သတ္တ = စတုရာဒသ
ဒွေး × အဋ္ဌ = သောဠသ
ဒွေး × န၀ါ = အဋ္ဌာရသ
၁ x ၁ - ဂူနေ = ၁ ၁ x ၁ - လီ = ၁
ဧက် x ဧက = ဧက်
ဧက် x ဒွီး = ဒွီး
ဧက် x တိန် = တိန်
ဧက် x စိုက်ရ် = စိုက်ရ်
ဧက် x ဖာဉ်စ် = ဖာဉ်စ်
ဧက် x ဆော့ = ဆော့
ဧက် x ဟာံတ် = ဟာံတ်
ဧက် x အဌ် = အံခ်ျဋ္ဌော
ဧက် x နော = နော
ဧက် × ဧက = ဧက်
ဧက် × ဒွေး = ဒွေး
ဧက် × တြိန်း = တြိန်း
ဧက် × ဇယ = ဇယ
ဧက် × ဗျည်း = ဗျည်း
ဧက် × သော = သော
ဧက် × သတ် = သတ်
ဧက် × အဌ် = အဌ်
ဧက် × နော = နော
Furan Burmar Gun gona loi Rohingyar Gun gona loi Milhábai Sa.
9 × 1 gune = 9
Nou× Ekka = Nou
Nou× Dui = Añçaro
Nou× Tin = Háñtaic
Nou× Sair = Sétiríc
Nou× Fañs = Fañssolic
Nou× sou = Fondaic-sair
Nou× háñt = Haith-tin
Nou× añth= Ba-Oitoir
Nou× nou = Ek-ací
Nou× doc = Nobboi
8 × 1 gune = 8
Añctho× Ekka = Añctho
Añctho× Dui = Cúllo
Añctho× Tin = Sobbic
Añctho× Sair = Bottiríc
Añctho× Fañs = Sallic
Añctho× sou = Añthsollic
Añctho× háñt = Fondaic-sóu
Añctho× añth= Haith-sair
Añctho× nou = Ba-hoittor
Añctho× doc = Ací
7 × 1 gune = 7
Háñt× Ekka = Háñt
Háñt× Dui = Soiddó
Háñt× Tin = Ekgoic
Háñt× Sair = Añçáic
Háñt× Fañs = Fañttiríc
Háñt× Sou = Bi-salic
Háñt× Háñt = Sallic-nou
Háñt× Añth= Fondaic-sóu
Háñt× Nou = Háittin
Háñt× Doc = Oittoir
6 × 1 gune = 6
Sóu× Ekka = Sóu
Sóu× Dui = Baró
Sóu× Tin = Añçáro
Sóu× Sair = Sobbic
Sóu× Fañs = Tiríc
Sóu× Sóu = Set-tiríc
Sóu× Háñt = Bi-salic
Sóu× Añth= Añth-sallic
Sóu× Nou = Fondaic-sair
Sóu× Doc = Háith
5 × 1 gune = 5
Fañs× Ekka = Fañs
Fañs × Dui = Doc
Fañs × Tin = Fundóro
Fañs × Sair = Kuri
Fañs × Fañs = Foñsoic
Fañs × Sóu = Tiríc
Fañs × Háñt = Fañstiríc
Fañs × Añth= Sallic
Fañs × Nou = Fañssallíc
Fañs × Doc = Fonjaic
4 × 1 gune = 4
Sair × Ekka = Sair
Sair × Dui = Añctho
Sair × Tin = Baró
Sair × Sair = Cúllo
Sair × Fañs = Kuri
Sair × Sóu = Sobbic
Sair × Háñt = Añçáic
Sair × Añth= Bo-tiríc
Sair × Nou = Set-tiríc
Sair × Doc = Sallic
3 × 1 gune = 3
Tin × Ekka = Tin
Tin × Dui = Sóu
Tin × Tin = Nou
Tin × Sair = Baró
Tin × Fañs = Fundóro
Tin × Sóu = Añçáro
Tin × Háñt = Ekgoic
Tin × Añth= Sobbic
Tin × Nou = Háñtaic
Tin × Doc = Tiríc
2 × 1 gune = 2
Dui × Ekka = Dui
Dui × Dui = Sair
Dui × Tin = Sóu
Dui × Sair = Añctho
Dui × Fañs = Doc
Dui × Sóu = Baró
Dui × Háñt = Soiddo
Dui × Añth= Cúllo
Dui × Nou = Añçáro
Dui × Doc = Kuri
1 × 1 gune = 1
Ek × Ekka = Ekka
Ek × Dui = Dui
Ek × Tin = Tin
Ek × Sair = Sair
Ek × Fañs = Fañs
Ek × Sóu = Sóu
Ek × Háñt = Háñt
Ek × Añth = Añctho
Ek × Nou = Nou
Ek × Doc = Doc
*မှတ်ချက်။ အာကာန်ပြည်၏ ဒေသအလိုက် အချို့စကားလုံးများ မသိတသိ ကွဲပြားတာလည်းရှိပါတယ်။
Posted by Rohang king at 7:53 AM
Labels: language, literature, Rohingyalish, သုတ
ရိုဟင်လေး| Feb 23, 2018, 12:29 AM FRI
Posted by Rohang king at 7:08 AM
Labels: genocide docs, poem
CÁRITÓR ADOB [တပည့်ကျင့်ဝတ်]
Dáf kucícecíki máni
Ustator cíkkát eteram gorí.
Húzorot takí késmot fati
Ciki báfi forí guni
Cárit ór adob adagorí.
Ustat or Adob
Elom o cíka
nosiyot gorí abob bana
Elóm basai norakí
cáritor mosibot oré oñsé
gomgán cíkai faro fán
o ustat ókkol
goróefañs adob.
အတတ်လည်း သင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊
Maa-bab or Adob
Horaf gan ottú ruké
Gom gán oré dahá
Elóm o cíka
falafusá ador o goré
Biyá yó gorí doun
e fañs ham
Maa-bab or zimma.
မကောင်းမြစ်တား ၊ ကောင်းရာညွှန်လတ်၊
အတတ်သင်စေ၊ ပေးဝေနှီးရင်း ၊
Posted by Rohang king at 9:44 PM
Labels: poem, Rohingyalish
Nize Háibar Golti Kíyal: Rozuban Cartoons
Faida Halu ရေးသားခဲ့သော Rzuban ကာတွန်းပုံပြင် ဖတ်ကြည့်ရအောင်-
Nize Haibar Golti Kiyal by Kuwaiccorjja
Posted by Rohang king at 12:37 PM
Labels: books, Rohingyalish, Story, သုတ
ရှောဗ္ဗီးရ်ဟူစိန်သည် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဖွီမာလီကျေးရွာရှိ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် မိသားစုမှ မွေးဖွားလာသည်။ ဖခင်မှာ ကျောင်းဆရာ အဟ်မဒူရာမာန်ဖြစ်ပြီး မိခင်မှာ ဒေါ်ဆော်လီမာခါတွန် ဖြစ်သည်။ ရှော်ဗ္ဗီရ်ဟူစိန်းသည် အခြေခံပညာကို ဇာတိရွာ၌ သင်ယူခဲ့ပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို ဘူးသီးတောင်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် စစ်တွေမြို့ အထက်တန်းကျောင်းမှ သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုတွင် စစ်တွေမြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၀-တန်းအောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျောက်ဖြူ ကော်လိပ်၌ ဥပစာတန်း သင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံကျောင်း၌ ဆက်လက် ပညာဆည်းပူးခဲ့ရာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဖြင့် ဘီအေဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၂-၆၅ ထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စစ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း (Ragoon University Crops- UTC) တက်ရောက်ကာ အခြေခံစစ်ပညာကိုလဲ သင်ယူခဲ့သည်။
ကျောင်းသားဘဝတွင် လူမှုရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အမျိုးမျိုးတွင် လည်းကောင်း၊ အစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးစံရေးရာ အပြင် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း ထထကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၉ ခုမှ ၁၉၆၂ ခုအထိ သူသည် ကျောက်ဖြူကော်လိပ် မွတ်စလင်ကျောင်းသားများ အသင်း (Muslim Students Association) နှင့် ဓညဝတီ ကျောင်းသားများ အသင်း (Danyawaddy Students Association) ဗဟိုလ်အမူဆောင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုမှ ၁၉၆၄ ခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားများအသင်း (Rangoon University Rohingya Student Organization) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတူ ၁၉၆၂ ခုမှ-၁၉၆၄ ခုထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်ကျောင်းသားများအသင်း (Rangoon University Muslim Students Association)၏ ဗဟိုလ်ကော်မတီဝင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ရှော်ဘ္ဗီရ်ဟူစိန်းသည် မြန်မာ့ကုန်သွယ်ရေးကောပိုရေးရှင်း ဝန်ကြီးဌာန၌ မြို့နယ် ကုန်သွယ်ရေး မန်နေဂျာအဖြစ် စတင်အမှူးထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုတွင် သူသည် ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေး မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်နေသော ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (Rohingya Independence Force) သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အာရ်အိုင်အေဖ် နှင့် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးပါတီတို့ ပူးပေါင်းသွားသောအခါ ရှောပ္ပီရ်သည် အဓိက ကဏ္ဍမှ ထထကြွကြွ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
၁၉၇၃ ခုတွင် ဇာဖော်ရ်ဟားဗီးပ်၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌ အာရ်အိုင်အေဖ် ကို Rohingya Patriotic Front (RPF) အဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ဗဟိုလ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ သူ့၏ စွယ်စုံအရည်အချင်းနှင့်အညီ တာဝန်မျိုးစုံကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သင်းတန်းကျောင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး၊ သင်တန်းဆရာကြီး၊ ပြန်ကြားရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး၊ နိုင်ငံခြားရေးရာ အတွင်းရေးမှူး စသည့်တာဝန်အမျိုးမျိုးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၅ ခုတွင် ပညာတတ်လူငယ်များ ပါတီသို့ အပြုံလိုက် ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ ဗိုလ်သည် သူတို့အား အခြေခံစစ်သင်တန်းကို ကိုယ်တိုင်သင်ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် အများစုမှာ ဗိုလ်၏ သင်တန်းဆင်း တပည့်လက်သားတွေသာဖြစ်ကြသည်။ သူသည် ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် သမိုင်းတွင်မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရစ်မည်ဖြစ်သည်။
၁၉၈၄ ခုတွင် အာရ်ပီအေဖ်နှင့် နူရ်အီစ္စလာမ် ခေါင်းဆောင်သော ရိုဟင်ဂျာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ဂိုဏ်းခွဲတစ်စုသည် Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) အဖြစ် ပေါင်းစည်းသွားသောအခါ ဗိုလ် ရှော်ဗ္ဗီရဟူစိန်းသည် အာရ်ပီအေဖ် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားကောင်စီ၌ သူ့ကို ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်၌ သူ့ကို ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဒုခေါင်းဆောင်အဖြစ် တင်မြောက်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ဗိုလ်ရှော်ဗ္ဗီရ်ဟူစိန်းသည် လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတလျှောက် နိုင်ငံပေါင်းများစွာသို့ ခရီးထွက်ပြီး အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးမှုများစွာကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အဖိနှိပ်ခံ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတို့၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စည်းရုံးလုံးဆော်မှုများ၊ တွေ့ဆုံမေတ္တာရပ်ခံမှုများကို မနားတမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရှော်ဗ္ဗီရ်ဟူစိန်းသည် သူ၏ ထူးခြားပြောင်မြောက်သော ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတို့ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုအတွက် သူ့ဘဝတသက်ကို စတေးခဲ့သည်။
သူသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော သင်တန်းနည်းပြ၊ တပ်မှူးတစ်ဦး၊ နှိုင်းချင့်မျှော်ခေါ်မှုကောင်းသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်လည်း
မနားတမ်း ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သူ၏ အလွန်ပြင်းထန်သော ရောဂါခံစားနေချိန်တွင်ပင် လူမျိုးအကျိုး ဘာသာအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ အမျိုးပေးတာဝန် ကျေပွန်ရင်း ARIF ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲတွင်ပင် အသည်းနာ ရောဂါဖြင့် ၁၉၉၈ ခု ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် လောကနှင့် ရိုမျိုးကို ခွဲခွာ၍ ထာဝရ နှုတ်ခွန်းဆက်သွားခဲ့လေသည်။ သူကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ ၁၉ နှစ်လွန်ခဲ့သော်လည်း ရိုမျိုး၏ နှလုံးသားထဲတွင် ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
Arakan Magazine , Volume. 3, Issue 3, March 2011. (P: 3-4)
Labels: ရိုသမိုင်း, ရိုကျော်, genocide docs, politic, သုတ
ရှေးမြန်မာ့ အလီပေါင်း နှင့် ယနေ့ရို အလီပေါင်း ရေတွ...